Vana Vanofanira Kudzidziswa—Kutungamirirwa Nevanhu Vakuru
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Alur Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Bislama Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiChangana (Mozambique) ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chol Cibemba Cinyanja Croatian Czech Danish Douala Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Kazakh Kekchi Kikaonde Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mbunda Mongolian Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuIndia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndebele (Zimbabwe) Nepali Ngangela Norwegian Nyaneka Nyungwe Oromo Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Bolivia) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Tlapanec Tok Pisin Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Uzbek (Roman) Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
NDIANI ANOFANIRA KUTUNGAMIRIRA VANA VENYU?
Vana vanoda kutungamirirwa uye kupiwa mazano nevanhu vakuru. Sevabereki, ndimi munotofanira kutungamirira uye kupa vana venyu mazano. Asi vamwe vanhu vakuru vanogonawo kuvabatsira uye kuvapa mazano.
NEI KUTUNGAMIRIRWA NEVANHU VAKURU KUCHIKOSHA?
Munyika dzakawanda, vana havawani nguva yakawanda nevanhu vakuru. Fungai izvi:
Vana vanoswera vari kuchikoro, uye ikoko vezera ravo vanenge vakawanda chaizvo kupfuura vadzidzisi nevamwe vanhu vakuru.
Vamwe vana pavanobva kuchikoro vanosvika kumba kusina munhu nekuti vabereki vavo vanenge vari kubasa.
Imwe tsvakurudzo yakaitwa kuUnited States inoti vana vari pakati pemakore 8 ne12, vanopedza maawa anenge 6 vachiona TV, vachiteerera mimhanzi nezvimwewo. *
Bhuku rinonzi Hold On to Your Kids rinoti: “Vana vakawanda vari kutsvaga mazano uye kutungamirirwa nevezera ravo vachisiya vanhu vakuru.”
MUNGATUNGAMIRIRA SEI VANA VENYU?
Wanirai vana venyu nguva.
ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Dzidzisa mwana nzira yaanofanira kufamba nayo; kunyange kana akwegura haazobvi mairi.”​—Zvirevo 22:6.
Vana vagara vachingoda kutungamirirwa uye kubatsirwa nevabereki vavo. Nyanzvi dzinototi kunyange vana vari kuyaruka vanokoshesa mazano avanopiwa nevabereki vavo kupfuura avanopiwa nevezera ravo. Mumwe munyori anonzi Dr. Laurence Steinberg mubhuku rake rinonzi You and Your Adolescent anoti: “Tsika neunhu hwemwana paanenge achiyaruka kusvika akura zvinonyanya kubva pane zvaanodzidza kubva kuvabereki vake.” Anowedzera kuti: “Vana vari kuyaruka vanoda kuziva zvamunofunga sevabereki uye kunzwa zvamunotaura, kunyange paya pavanenge vasingabvumirani nezvimwe zvamuri kutaura.”
Sezvo vana venyu vagara vachida kutungamirirwa nemi, itai zvese zvamunogona kuti muvatungamirire. Vawanirei nguva, vaudzei maonero amunoita zvinhu, zvamunokoshesa uye zvamakadzidza muupenyu.
Mutsvagirei munhu anomubatsira uye anomupa mazano.
ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Munhu anofamba nevanhu vakachenjera achava akachenjera.”​—Zvirevo 13:20.
Mune munhu mukuru here wamungaita kuti abatsire uye ape mwana wenyu mazano? Munokwanisa here kuronga nemunhu iyeye kuti apote achimboita nguva nemwana wenyu? Izvi hazvirevi kuti munhu iyeye ndiye atova mubereki wemwana wenyu. Asi mazano anobva kumunhu mukuru wamunovimba naye uye wamunoziva kuti haazokanganisi mwana wenyu anogona kutomubatsira kushandisa zvamunomudzidzisa. Bhaibheri rinoratidza kuti Timoti akabatsirwa chaizvo neushamwari hwake naPauro kunyange paainge akura, uye Pauro akabatsirwawo nekushamwaridzana kwake naTimoti.​—VaFiripi 2:20, 22.
Mazuva ano, vanhu vemumhuri havachagari pedyo nepedyo nekuti vanambuya nanasekuru, vanatete nevamwe veukama vanenge vachitogara kure kana kune dzimwe nyika. Kana zviri izvo zvakaita mhuri yenyu, edzai kutsvagira vana venyu vanhu vakuru vane unhu netsika zvamunoda kuti vatevedzere.
^ ndima 9 Tsvakurudzo iyoyo inotiwo vana vari kuyaruka vanoita maawa anenge 9 pazuva vari pamafoni kana pamatablet avo. Asi maawa ataurwa aya haasanganisiri nguva yavanoita vari paIndaneti kuchikoro kana kuti vachiita homuweki yavo.
Mwana anoda kutungamirirwa nevanhu vakuru anowanzova munhu ane uchenjeri uye anoziva zvaanoita paanokura
Ndiri muenzaniso wakanaka kuvana vangu here?
Vana vangu vanoona here kuti ndinotsvagawo mazano kune vanhu vane ruzivo kundipfuura?
Ndinombowanawo nguva yekutandara nevana vangu here ndichiratidza kuti ndinovakoshesa?
“Mwanasikana wangu anombouya achida kutaura neni pandinenge ndakabatikana. Ndinogara ndichimupa nzeve, kunyange zvazvo dzimwe nguva achifanira kumbondimirira zvishoma kuti ndipedzise zvandinenge ndichiita, kuti ndinyatsoteerera zvaanenge achitaura. Ini nemudzimai wangu tinoedzawo nepatinogona napo kuita zvatinenge tichimudzidzisa kuti aone kuti nesuwo ndizvo zvatinoita.”​—David.
“Pakazvarwa mwanasikana wedu, ini nemurume wangu takasarudza kuti ndisaenda kubasa kuti ndinge ndiri pamba ndichimurera. Handizvidembi nekuita chisarudzo ichi. Zvakakosha kuti uite zvese zvaunogona kuti uve nemwana wako nguva dzese kuti unyatsomutungamirira. Uye kuva nemwana wako nguva dzese kunoita kuti aone kuti unomuda.”​—Lisa.
KUWANA NGUVA NEVANHU VAKURU
“Vana vangu vakakurira mumhuri yaiva nevanhu vakuru vemazera akasiyana-siyana avo vaifarira zvinhu zvakasiyana-siyana uye izvi zvakavabatsira kudzidza zvakawanda nezveupenyu. Semuenzaniso, vakashamisika pavakaudzwa nambuya vangu kuti vachiri vadiki, kumba kwavo ndiko kwakatanga kuva nemagetsi. Vakavaudzawo kuti vanhu vemunharaunda vaiuya kumba kwavo kuti vangoona magetsi achibatidzwa uye achidzimwa. Nyaya iyoyo yakaita kuti vana vangu vaone kuti kare upenyu hwanga hwakasiyana nezvahwava mazuva ano. Kunzwa nyaya dzambuya vangu idzi kwakavabatsira kuti vawedzere kuvaremekedza uye kuti varemekedzewo vamwe vanhu vakwegura. Vana vanodzidza zvakawanda kana vakaita nguva yakawanda nevanhu vakuru kupfuura yavanoita nevezera ravo.”​—Maranda.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Kutungamirirwa Nevanhu Vakuru